We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာ အမျိုးသမီးများ လွတ်လပ်မှု အတွက် စိုးရိမ် ဘွယ်
မြန်မာ အမျိုးသမီးများ လွတ်လပ်မှု အတွက် စိုးရိမ် ဘွယ်
Do not worry ko moe thee,it is not like islamic.
Don't worry,it's not like islamic.
နောက်ဆို ဗမာ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက.. ခေါင်းမြီးခြုံ ကုလားမတွေထက် ပိုပြီးနေရထိုင်ရ ကျဉ်းကြတ် သွားနိုင်တယ်....မိန်းမသဘာဝကောက်ကြောင်းတွေ အဖုထစ်တွေ ကိုဖော်ပြီးဝတ်တာတွေကို ဖမ်းပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူ မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်...
14 June 2013 at 00:43
တဒကာမလေးတွေပေါင်ကြားထဲက ယောနိ ကိစ္စတောင် ဘယ် အချောင်းပေးဝင် ဘယ်အချောင်းတော့ပေးမ၀င်နဲ့ ဆိုပြီး ယောနိ ပုလိပ် လုပ်နေကြပါရော့လား..။
ကျုပ်လဲ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစစ်စစ်ပါ။
လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ရွေးချယ်နိုင်မှုကို ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ ချုပ်ချယ် ဖို့ မလုပ်ပါနဲ့ ဘုရားမကြိုက်ပါဘူး ။ အဲလို ခင်ဗျားတို့လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကိုလဲ ဟာဂျီ ၀ီရသူတို့ အဗ္ဗဒူလာပညာသီရိတို့လို့ ခေါ်ရတော့မယ့်ကိန်း ဆိုက်နေပါဦးမယ် ။
မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ ပလီတွေမှာ ဘာသာခြားမိန်းကလေးကိုယူပြီးသူတို့သာသနာအောက်ခေါင်းလျှို သူတို့ လူမျိုးရှေ့ ဒေါ့ဂီ ပေးဖို့ ကို ငွေနဲ့ကြေးနဲ့ရင်းလုပ်နေတာလဲ အမှန်ပါပဲ ။ ဒါမျိုးကို ဖော်ထုတ် နယ်နှင် ပစ်လိုက်ကြပေါ့ ။ ခုတော့ ဘယ်သူ့ ယူ ဘယ်သူ့ မယူနဲ့လုပ်နေတော့ ကိုယ်တော်တို့ လဲ တရားဝင် တက်ခွပေးနိုင်တာမှတ်လို့ဗျာ မွှားပါတယ်။
ဥပမာ ဗျာ ... ကိုယ်တော်ရယ် နောက်ထပ်ကုလားတကောင်ရယ် နှစ်ယောက် ပဲရှိတုန်း မှာ
သာသနာဖျက်မ ဟော့တီလေးတယောက်က အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် ခင်ဗျားတို့ ကန့် သတ်တဲ့အတိုင်းပဲနားထောင်လက်ခံပြီး ခင်ဗျားနား ကပ်လာပြီး .. "ဘုန်း .. ..ဟင့် ..ဘုန်း..မီး..ယားနေပြီလို့ ... " ပြောပြီး တခါထဲ သူ့ ဖြတ်ဖောက်ချုပ် ပစ္စည်းလေးကို ကာမဆွမ်း တဆွဲစာလေးလှူမယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ်တော့်အနေနဲ့ ဘုန်းပေးနိုင်တာမှတ်လို့ ဟုတ်ဘူးလား ..။ ကုလားကတက်အုပ်သွားမှာဗျား ။ ဒီတော့ ကိုယ်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာကျိန်းသေမှ ဘယ်သူ့ ယူ ဘယ်သူ့ မယူနဲ့ပြောတော့ဗျာ ။ ခုတော့ နေပါစေလား ။
အသေ၀နာစဗာလနံ ပူဇာစပူဇနေယျာနံ ။
မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ ပလီတွေမှာ ဘာသာခြားမိန်းကလေးကိုယူပြီးသူတို့သာသနာအောက်ခေါင်းလျှို သူတို့ လူမျိုးရှေ့ ဒေါ့ဂီ ပေးဖို့ ကို ငွေနဲ့ကြေးနဲ့ရင်းလုပ်နေတာလဲ အမှန်ပါပဲ ။ ဒါမျိုးကို ဖော်ထုတ် နယ်နှင် ပစ်လိုက်ကြပေါ့ ။
It is easier said than done. Looks like you are ideologist who think everything can be done as per ideology.
ခုတော့ ဘယ်သူ့ ယူ ဘယ်သူ့ မယူနဲ့လုပ်နေတော့ ကိုယ်တော်တို့ လဲ တရားဝင် တက်ခွပေးနိုင်တာမှတ်လို့ဗျာ မွှားပါတယ်။
Please if you are Buddhist and married man, tone down your voice. If you are not, then I have nothing to say.
your comment is very very good. awesome...
This is definitely notajob for monk or monks.
This is very big big issue to sort out strategically with top politicians and to educate those Burmese females.
wiyathu is just like Gasoline, he wants to see or make fire.
He brought this big big issue again. He is definitely under control by someone (you name it,i don't need to reveal here).
Politics is very very delicate and complicate,wiyathu is definitely not good enough to do this.
14 June 2013 at 22:58
အဲဒါတွေ ဘုန်းဘုန်းအလုပ်မဟုတ်ဘူး...ကန့်ကွက်တယ်ဒီကိစ္စ... သာသနာပြန့်ပွားအောင် တခြားနည်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြပါ။ ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်မလျှိုချင်ပါနဲ့။ အစိုးရတရပ်ကနေ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ ခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်မှ ဒီပြသနာပြေလည်အောင်လုပ်လို့ရမှာ။
15 June 2013 at 23:17
မအေလိုး ၀ီရသူ ထောင်ထဲ မှာ နေတုံး က ကုလားက ဖင်တက်လိုးလိုက်လို့ ကုလားဆို အသေမုန်းနေတဲ့ မအေလိုး ၀ီရသူ ဟာ ယာဘ ငြိနေတဲ့ ကိုယ်အမေကိုယ်လိုးတဲ့ မအေလိုးပါ
He isaRadical Monk.Don't follow his way.
17 June 2013 at 05:12
He isaRadical Monk.Don't follow his way,this isn'taBuddha way.
17 June 2013 at 05:16
that's not the right way to solve the problem. I don't have doubt he love our country and people. but I think he needs to be educated. he still needs to learn how to think critically. it's all about the situation of political situation of the country. bad political situation, so bad education , bad economy and also religion. that's the reason of there are too many fake monks in the country.
နိဗာန်ရောက် ကြောင်းမပောာ လင်ယူသား မွေးကြောင်း ပြော အကျယ်ချဲ့ အချိန်ကုန် --ဩ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေ လူး လေပါ့ကွာ သင်ဏန်းအရေခြုံ ဘုန်းကြီးအလုပ် ဘုန်းကြီးမလုပ် ထင်တာတွေ ပြော ထင် တာ တွေ လုပ် ထီမ်းမဲ့ သိမ်း မဲ့ လူ ကမရှိ သူ့လုပ်ရပ် သူအဟုပ်ကြီး ထင်နေ တဲ့ ဒီ ဝီရသူ လို ဘုန်းကြီးမျီးတွေ လွတ် နေ သမျ တော့ ဘယ်တော့ မှ နိင် ငံ လည်း ငြိမ် ချမ်း လိမ့်မယ် မဟုတ် ပေ ဘူး
21 June 2013 at 08:40